Tirin barakadaada, dhibaatooyinka ha aheyn. - qarsoodi - Quotes Pedia
Tirin barakadaada, dhibaatooyinka ha aheyn. - Qarsoodi
Nolosha, dabeecaddu wax badan ayey ka hadlaan. Waa aragtideena iyo ficilkeena qeexaya cidda aan nahay. Dhaqankeenu waa inuu ahaadaa sidan oo inaga caawinaysa innaga iyo kuwa kale ee nagu xeeran horumarka iyo horumarka. Waa inaan nolosha hore eegno rajo iyo rajo qab.
Waa inaan awooddeena u isticmaalnaa heerka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah si aan u koreyno ugana mahadnaqno nolosha qaaliga ah ee nala siiyay. Kulligeen waxaan leenahay qaybteenna halganka, laakiin furaha ayaa ah inaan waligeen u oggolaan inay taasi na dhibayso. Saas ma aha wakhtiyadaas oo kale, waxay caawineysaa wax weyn haddii aan tirinno barakooyinka aan wadaagno.
Markay fashilaad ama dhibaatooyin ina soo foodsaaraan, awood uma lihin inaan aragno wax aan ahayn dhibaatooyinka mooyee. Hase yeeshe waa lama huraan, in xaaladaha caynkan oo kale ah gaar ahaan, ay tahay inaan fiiro gaarno dhammaan waxyaabaha iyo dadka nalagu duceeyey. Kuwaani waxay ina siinayaan farxad iyo awood aan kulano dhibaatooyinkeena.
Waxay ina siineysaa awood aan kula dagaallamno dhibaatooyinkeena sababta oo ah waxaan garowsanahay inay jiraan waxyaabo badan oo mudan in la dagaallamo. Waxaa jira barako nolosheena ku jira oo aan uga mahad celinno. Tani waxay ina siinaysaa rajo, la dagaallan dhibaatooyinkeena, oo aan horay ugu soconno.
Waa inaan ka baranaa casharradeena dhibaatooyinkayagii laakiin ma qabsanno murugada iyo cabsida la timid muddo dheer. Dabcan, way fududahay in la yidhi intii la qaban lahaa. Laakiin waad ka gudbi kartaa haddii aad naftaada ku hareereysan tahay xaalad macquul ah. Waad ku socon kartaa haddii aad naftaada ku mashquuliso sameynta waxa aad jeceshahay. Waxaas oo dhan, xusuusnow inaad is-hoosaysiin oo mahadnaq waxaad haysato oo dhan.
Xigashooyinka duco iyo hadalada
Xigashooyin gaagaaban oo wanaagsan
Xigashooyinka fikirka togan
Dhibaatooyinka xigashooyinka iyo odhaahyada
Dhibaatooyinka ayaa xiganaya Sawirro
Xigashooyinka ku saabsan Barakooyinka Eebbe
Su'aalaha kor u kaca
Erayada caqliga leh iyo Maahmaahyada
Uma daweyn kartid dadka sida qashinka oo waxaad caabudaa Ilaah isla waqtigaas. - Qarsoodi
Ulama dhaqmi kartid dadka sida qashinka oo waxaad filan kartaa in Ilaaha Qaadirka ahu uu kula joogo adiga oo jooga dhammaan waxyaabahaaga ...
Labada maalmood ee ugu muhiimsan noloshaada waa maalinta aad dhalatay, iyo maalinta aad ogaato sababta. - Qarsoodi
Maalinta aan dhalanay waa maalinta inoo furi doonta fursado aan tiro lahayn. Kaliya maaha fursadaha,…
Mararka qaarkood waxyaabaha sida badan wax u yeera waxay na bartaan casharrada ugu fiican. - Qarsoodi
Noloshu isku socod kuma wada socoto markasta. Way iska cadahay inaad
Aamusnaanta ayaa ka wanaagsan riwaayadaha aan loo baahnayn. - Qarsoodi
Khibradaha kaladuwan ayaa siyaabo kala duwan noogu kiciya. Laakiin waa inaan dhammaanteen baranaa sida looga jawaabo si ku habboon xaaladaha kaladuwan si…